विश्वभर क्रिसमस पर्व मनाइँदै – News Portal of Global Nepali
People gather at Bondi Beach on Christmas day in Sydney, Australia, Monday, Dec. 25, 2017. Backpackers and other tourists join locals on the beach to celebrate each Christmas. (Dean Lewins/AAP Image via AP)
वासिङटन । विश्वका विभिन्न देशहरुमा आज क्रिसमस पर्व मनाइँदै छ । इसाई धर्मका प्रवर्तक जिसस् क्राइस्टिको जन्मदिनको अवसर पारेर आजका दिनलाई इसाई धर्मावलम्बीहरुले क्रिस्मस पर्व मनाउने गर्दछन् । यस पर्वका अवसरमा हुनसक्ने हिंसालाई लिएर यस पर्वको पूर्वसन्ध्यामा कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको छ । कतिपय देशहरुले क्रिसमस र नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा नयाँ सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेको जनाएका छन् ।